Daawo Sawirada Xubno katirsan Al-Shbaaab oo doonayay in ay ka dhoofaan garoonka Aadan Cadde oo la qabtay	« AYAAMO TV
Daawo Sawirada Xubno katirsan Al-Shbaaab oo doonayay in ay ka dhoofaan garoonka Aadan Cadde oo la qabtay
637 Views Date March 26th, 2014 time 4:11 pm
Ciidamada Nabad Sugida Dowlada Soomaaliya ayaa ku guuleestay in ay gacanta ku dhigay ilaa 8-nin oo katirsan Al-Shabaab, kuwaa oo qaarkood doonayeen in ay ka dhoofaan garoonka Diyaaradaha Aadan Cadde ee Magaalada Muqdisho.
Shan kamid ah ragan lasoo qabtay ayaa la sheegay in la qabtay xili ay doonayeen in ay ka dhoofaan garoonka Diyaaradaha Aadan Cadde ee Magaalada Muqdisho iyagoo kusii jeeday Deegaano kala duwan.
Saraakiisha ciidamada amniga ayaa sheegay in shan ka mid ah Ragan Shabaab katirsan laga soo qabtay garoonka ay ku sii jeedeen Gobollada Waqooyi Galbeed, Hiiraan iyo Dowlad Deegaanka Soomaalida Ethiopia.
Halkan ka Aqriso Magacyada Xubnahan lasoo bandhigay
1-Maxamed Xiireey Bakaari .
2-Iidoow Cabdulle Barqadle
3-Ibraahin Cabdulle Barqadle
4-Cumar Aadan Maxamed
5-Cabdirisaaq Maxamed Ibraahim.
6-Cabdifataax Cali Maxamed
7-Xasan Nuur Maxamed
8-Shariif Ciise Aadan.
Ciidamada Nabad Sugida Dowlada Soomaaliya ayaa mudooyinkii ugu dambeeyay Magaalada Muqdisho waxa ay ka wadeen howl galo gaar ah ay ku bartilmamaeedsanyeen rag katirsan Al-Shabaab oo qaarkood xogtooda la helay in ay joogaan Magaalada MUqdisho.